Gịnị bụ ọdịnihu nke nchịkọta data na-agafe agafe?
Na Mọnde, Nọmba 3, 2015 Wednesday, November 4, 2015 Douglas Karr
Agbanyeghị na ndị ahịa na ndị na-ebubata ngwa ahịa na-ekwu maka nnakọta data nnabata dịka ihe na-eto eto nke nghọta ndị ahịa, ihe dịka ụzọ atọ na-ekwu na ha agaghị eji data na-agafe agafe afọ abụọ site ugbu a. Nchoputa a sitere na nyocha ohuru nke GfK na Institute for International Research (IIR) duziri n’ime ndi ahia 700 na ndi na ere ahia ahia. Kedu ihe nchịkọta data na-agafe agafe? Nchịkọta data na-agafe agafe bụ nchịkọta nke data ndị na-azụ ahịa site na omume ha na mmekọrịta na-enweghị ike